J/land oo shaacisay waqtiga caleema saarka Axmed Madoobe & DF oo qorshe cusub degtay -News and information about Somalia
Home Warkii J/land oo shaacisay waqtiga caleema saarka Axmed Madoobe & DF oo qorshe...
J/land oo shaacisay waqtiga caleema saarka Axmed Madoobe & DF oo qorshe cusub degtay
Qabanqaabadii ugu dambeysay ee Xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka bilaabatay Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland.
Ciidanka Jubbaland ayaa si weyn u adkeeyay Ammaanka Magaalada Kismaayo, waxaana Xaafaddaha kala duwan ee Kismaayo ka socda howlgallo lagu xaqiijinaayo Ammaanka.
Mas’uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa xaqiijiyay in Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe lagu waddo in uu dhaco 9-ka bishan October oo ku beegan Arbacada soo socota.
Waxaa lagu waddaa in ay ka qeyb galaan Xafladda Caleema saarka siyaasiyiin, Xildhibaano ka tirsan Labada Gole iyo marti sharaf kale.
23-kii bishii hore ayay u baaqatay Xafladda sababo la xiriira dowladda Federaalka Soomaaliya oo xayiraado ku soo rogtay diyaaradaha aada Kismaayo.
Previous articleXaaf oo si deg deg ah ugu dhawaaqay Guddiga doorashooyinka iyo Farsamada Galmudug
Next articleFaahfaahin: Taliyaha ciidamada Kumaandooska ee Danab oo ka badbaaday laba Qarax oo lala beegsaday Kolonyo uu la socday
Madaxweyne Waare Oo Magacaabay Guddiga Gurmadka Fatahaada Webiga Shabeelle
Muungaab: ”Dhagax waa dhaaftay Magalada Muqdisho Ganjeelaa ku xiran laamigeeda”